Kaleio: A Global Workforce Yemagariro Network | Martech Zone
Kaleio: A Global Workforce Yemagariro Network
Chipiri, May 14, 2013 Douglas Karr
Kana chako chikuru chinokurudzira online chiri chekubatanidza uye kugovana ruzivo nevamwe vemaindasitiri nyanzvi, kana kubatana nevatengi nevatengesi, Facebook iri kukurumidza kuve isingadzoreke. Pakati pemifananidzo yako pachako uye kushambadzira, kuri kuita ruzha. LinkedIn ichiri nzvimbo yekuve asi Kaleio iri kutsvaga kukurudzira kutaurirana uye kubatanidza nyanzvi zvishoma zvakasiyana.
Ipuratifomu yavo yakaradzikwa, pasina chero bhuru, mune inofedhwa, mhinduro dzinotumira bhodhi yeQnA, bhodhi reZviitiko, Musika wekutumira mikana kana kushambadza yako wega, uye kunyange Boardroom - kamuri yekutumira mameseji aunogona kubatana nevamwe mukati vari voga.
Kaleio chiratidzo chakapetwa kanokwana
Kurudzira kugadzirwa kwenzvimbo yepasi rese yevashandi. Parizvino, hapana nzira dzakareruka dzekutaurirana mukati meindasitiri yepasi rose, kutengeserana, uye mabasa.
Kufambisa network uye kubatana mukati mevashandi vepasirese nharaunda. Kaleio inopa nharaunda kune avo vari muvashandi kuti vanzwe chikamu chewedzeredzwa netiweki yevanhu vanonzwisisa basa ravo rezuva nezuva nematambudziko ebhizinesi.
Nzvimbo yenyaya uye yakakura indasitiri nhau, zviitiko, kugadzirisa, uye maitiro. Nhengo dzinoramba dziripo neindasitiri nhau, zviitiko, kugadzirisa, uye maitiro.
Inotendera avo vari munharaunda yevashandi kuti vape, pamwe nekutsvaga, mabasa, zvigadzirwa, masevhisi, uye mhinduro Kaleio mota inopa kushambadzira kwemahara kwemabhizinesi, kusanganisira yakanakisa yekutsvaga turu yezvigadzirwa, masevhisi, mhinduro, uye mikana yemabasa. Vanhu vanogona zvakare kukumbira, kana kupa, mazano anobatsira ezve bhizinesi rezuva nezuva, zvemunhu, kana zveindasitiri-zvakanangana nenyaya.
Gaka rimwe guru randinoona naro Kaleio ndeyekuti haina kugadzirirwa kushandiswa kwenhare uye haina nharembozha. Munyika mune nyanzvi dzinoshandisa mafoni avo semidziyo yavo yekutanga yekutaurirana, izvi zvinoda kuitiswa kana vakatarisira kusimuka sechikuva!
Join Kaleio zvemahara nhasi. Ivo zvakare vakatarira kushambadzira iyo inogona kutengwa futi.
Tags: b2b networkvemunharaundakareiopasocial network